Onwere onye na aju ajuo.com? | Martech Zone
Onwere onye na aju ajuo.com?
Tọzdee, Eprel 26, 2007 Na Mọnde, Nọmba 5, 2019 Douglas Karr
May nwere ike ịchọpụtala na otu n'ime njikọ m na nso nso a Ask.com na Live esonyela na Sitemaps ọkọlọtọ. Okwu sitemap bu ihe ngosiputa nke oma - obu uzo nke igwe nyocha iji weputa weebụsaịtị gi. A na-ewu saịtị saịtị na XML nke mere na ha nwere ike iri ngwa ngwa site na mmemme. Enwere m Stetheet etinyere m na saịtịmap nke mere na ị pụrụ ịhụ ihe ọmụma na-ẹdude.
Sitemaps na WordPress
na WordPress, Ọ dị mfe iji machiini ma wuo saịtị saịtị gị. Naanị wụnye ya Ntanetị Google Sitemap. Ana m agba ọsọ 3.0b6 nke ngwa mgbakwunye ọ dịkwa mma. Emechara m gbanwee ngwa mgbakwunye ahụ wee gbakwunye nkwado nkwado Ask.com yana. Edenyela m mgbanwe m na onye nrụpụta ma nwee olileanya na ọ ga-agbakwunye ha ma wepụta nsụgharị ọzọ.
Nyefe Sitemap gị na Ask.com
Nwere ike ịnyefe saịtị gị na Ask.com na aka site na ngwa ntinye ntinye saịtị ha:
Obi dị m ụtọ ịhụ nke a wee nyefee saịtị m ozugbo wee bido ọrụ na mgbakwunye ngwa mgbakwunye. Amaara m na Ask.com overhauled n'ụlọ ha n'oge na-adịbeghị anya wee nweta akwụkwọ akụkọ n'ihi ya echere m na ọ ga-eduga na ụfọdụ okporo ụzọ ndị ọzọ.
Ihe karịrị 50% nke nleta m na-adị kwa ụbọchị si Google mana ahubeghi onye obia si Ask.com! Ahụrụ m aghụghọ Yahoo! ndị ọbịa na ole na ole Live ọbịa… ma ọ dịghị Ask.com ọbịa. Na ịlele ụfọdụ nsonaazụ ọchụchọ Ask.com, ọtụtụ n'ime ha na-ele anya agadi (na mgbe ụfọdụ afọ) na-ezo aka na ngalaba Aha m ochie na isiokwu ochie. Ikekwe nke a bụ isi ihe kpatara na Ask.com anaghị enweta okporo ụzọ ọ bụla? Onwere onye n’ime gị jiri Ask.com?
Ntuziaka 5 dị egwu iji mepụta nrụpụta abụọ gị
Oge ikpeazu m gbalịrị ask.com, ewepụtaghị m ezigbo nsonaazụ ọchụchọ. Imirikiti njikọ ndị ahụ ọ gosipụtara enweghị ma ọ bụ na ha anọghị ma ọ bụ na ha mere agadi n'ezie. Amaghị m na onye ọ bụla na-eji ihe ọ bụla MA Google ọzọ. Ma ọ dịkarịa ala, ha na-edepụta aha ha kwa mgbe.
Chaị, ọmarịcha ogo Technorati. Ndị ahụ siri ike ịbịa.
Mkpakọrịta ikpeazụ m gbalịrị ịjụ bụ oge mbụ m hụrụ ka ndị ahịa ahụ na-ere ahịa. Achọpụtara m na nsonaazụ ha laghachi adịghị mma. N'ụzọ na-akpali mmasị, Technorati anaghị ele ha anya dị ka ọkwa kachasị elu. Nwere ike ịchọ ngalaba gị na Jụọ, wee ping Technorati na rịzọlt URL. Ọ gaghị agbawa gị na 100 kachasị elu, mana ọ bụ free Technorati backlink!
Ana m enweta 5 ruo 10 site na ask.com kwa ụbọchị (na ochie m blog)… na niile na otu isiokwu… ..
Ka anyị hụ ma ihe a Sitemap ihe mma anyị ọnọdụ 🙂
Gwa m ya.
Echere m na okporo ụzọ na-aga na blọọgụ m bụ Google site na ọdịda nke ala, yahoo na ndụ na-achọ ihe nke abụọ, jụọ ajụjụ enweghị ebe ọ bụla.
Nov 29, 2007 na 9:54 AM
M nnọọ dị nnọọ a blog ugbu a… ma oké stof!
Amaara m na nke a bụ akụkọ ochie, mana m chọrọ ịgwa gị na achọtara m gị site na ask.com! Ihe ọchị, ọ bụghị ya?
M na-eji ask.com mgbe m na-achọ ihe doro anya. Maka ebumnuche ụfọdụ, ha na-atụ m aka mgbe niile n'ụzọ ziri ezi.
Nke ahụ dị egwu ịnụ! Naanị m gụrụ ya Jụọ na-ewepụ ụfọdụ ndị folks ma na-eche echiche iji Google - mana nzaghachi bụ na injin ha dị ezigbo mma na ajụjụ ụfọdụ. Ejila m ya ọtụtụ, mana anụla ihe ọma na mgbagha na algọridim nke injin ha dabere.